Anubis, webhu-based system yekukubatsira iwe nezvicherwa | Linux Vakapindwa muropa
Anubis: iyo nyowani yeBitcoins yekuchera software
Anubis icho chishandiso chitsva chekuchera. Iwo akanyanya fashoni emari yedhijitari, akadai seBitcoins (BTC) kana Litecoin (LTC), ave zvino tarisiro yekutarisisa nharaunda yese inoda kutora chikamu mune ino yezana remakore rechiXNUMX kuchera kuburitsa mari yakakosha kwazvo yedhijitari.
Kuchera kunowanzoitwa nemapoka anonzi Mafuro kana kuburikidza nemidziyo ine ASIC ine simba yakagadzirirwa basa iri kana kuburikidza nemakadhi akajeka emifananidzo yakatsaurirwa pabasa iri kuti uwane huwandu hwakanaka hwekuverenga (H / s kana hashes pasekondi) kuti uwane yakawanda yemari idzi munguva shoma. Vamwe vanotodhonza avo miniPCs mabhodhi seRaspberry Pi yezvemigodhi… (kuti kunyangwe simba rayo remakomputa riri diki, ingangoita 150 kH / s, mashandisirwo ayo akaderera anogona kuve akawedzera kukosha).
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa zvirongwa zvemigodhi ndeye cg mugodhi, asi pamwe iwe unofarira Anubis. Iyo webhu-yakavakirwa chirongwa iyo inobvumidza iwe kuti uve nebhokisi rekushandisa raunogona kuti "upfume" nemari idzi.
Kana iwe uchifarira Anubis, unogona kumuwana kana kuziva zvakawanda nezvake mune yake chikamu chakatsaurwa paGitHub, sezvo iri chirongwa chemahara.
Mamwe mashoko - DM & P inoburitsa miniPC inoenderana neArduino uye inokwanisa kumhanyisa Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Anubis: iyo nyowani yeBitcoins yekuchera software